AGROTECHNICS BEERASHADA TUFAAXA "MEDUNITSA": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Apple geed "Medunitsa" - noocyada ugu caansan ee geedaha tufaaxa xagaaga, taas oo lagu gartaa adagaanta jiilaalka iyo sifooyinka wanaagsan ee midhaha.
Taariikhda geedka geedaha tufaaxa "Medunitsa"
Dhirta tufaaxa ee kala duwan "Medunitsa" ayaa la baddalay in ka badan 50 sano ka hor. Cilmi-baadhaha S. I. Isaev wuxuu soo gooyay laba nooc: Cinnamon Striped iyo Welsey. Kala duwanaanshahan waxaa loo tixgeliyaa guul weyn, sababtoo ah waxay u adkaysataa qolofta.
Ma taqaanaa? Magaciisa "Medunitsa" waxay heshay macaankeeda, iyada oo aan lahayn lakin, dhadhan iyo caraf udgoon.
Qeexida astaamaha noocyada kala duwan
Qabashada sifaha geedka tufaaxa "Medunitsa", waa in la ogaadaa in ay jirto laba nooc oo kala duwan:
Tixgeli sharraxa geedka iyo midhaha "Lungwort." Ka dib markii la beero, geeduhu wuxuu bilaabaa inuu midho u dhasho sanadka saddexaad. 10ka sano ee ugu horeeya miraha tufaaxa ee miro badan oo si joogta ah, ka dibna dhalidu waxay yaraataa oo waa xilliyo dabiici ah.
Dhirta kala duwan ee noocyadaasi waa mid aad u sarreeya oo sarreeya, leh taajkii Girgida ah. Laantu kama fogaan jirridda inteeda badan waxaana loo jeedaa kor. Caleemaha cagaaran waxay leeyihiin midab khafiif ah oo cagaaran, oo jilicsan, oo yar yar oo dhexdhexaad ah.
Midhaha geedka tufaaxa "Summer Medunitsa" waxay ku sii jirtaa ilaa hal bil. Midhaha miraha waa kuwo yaryar, wareegsan oo leh jaale hurdi ah, laakiin markii ay bislaadaan, dhinac ayaa noqda casaan casaan. Tufaaxu wuxuu ka duwan yahay midabka iyo carafka.
Marka la eego in geedka tufaaxa ee noocyada kala duwan ay koraan oo u kobcaan si dhakhso ah, waxaa lagama maarmaan ah in la helo wakhti ay ku sameeyaan taajkii geedka dhowr sano. Kala duwanaan tufaaxan waa mid caan ah waxayna ku habboon tahay caanaha, casiirka iyo macaanka. Khasaaradu waa in miraha aan dib u soo kicin isla waqti isku mid ah.
Geedaha kala duwan ee tufaaxa "Winter Lungwort" ayaa sidoo kale aad u sarreeya. Isku day in aad kala soocdo sannadka shanaad ka dib markaad degto. Miraha waxaa la jeexay kaydinta xilliga qaboobaha dhamaadka Sebtembar. Waxay si dhakhso ah u isticmaali karaan uma baahna kobcinta inta lagu jiro kaydinta. Tufaaxa inta lagu jiro Bisaylkiisa waxay leeyihiin midab jaalle ah oo leh lakab casaan leh, waxay yihiin casiir leh oo aad u macaan.
Kala duwanaansho "Madada Medunitsa" waxay leedahay faa'iidooyinka:
geedaha adag ee jiilaalka;
miraha waxay diyaar u yihiin inay cunaan isla markiiba goosashada;
Tufaaxu waxay leeyihiin dhadhan macaan, ha u lahayn dhadhan dhan, taas oo dhif u ah noocyada jiilaalka.
Akhri sidoo kale ku saabsan beerista noocyo kale oo tufaax ah: Gloucester, Semerenko, Dream, Shtreyfling, Uslada, Orlik, Melba.
Waa inay noqotaa hab masuuliyad u leh xulashada dhoofinta markii la gadanayo, si aan mustaqbalka uga niyad jabin oo u korin geed caafimaad leh.
Talooyin aasaasi ah oo ku saabsan doorashada xoqidda:
Marka aad iibsanaysid abuurka, waxaad la xiriirtaa dukaamo khaas ah ama xannaaneyn. Ha iibsan dhirta suuqyada halkaas oo aysan aheyn wax prikopany, sida seedling waa daciifay oo u dhiman karaa. Sidoo kale suuqa waxaad ka iibsan kartaa noocyada khaldan ee qaldan ee aad qorshaysanayso inaad iibsato, sababtoo ah waxay u dhowdahay in la aqoonsado noocyo kala duwan oo ah geedaha caleen la'aan ah.
Da'da ah ee seedling waa in aan ka badnayn laba sano, sababtoo ah yar yar ee dhirta, si dhakhso ah oo sahlan waxay qaadan doontaa xididka. Warshad aan lahayn laamaha waa sapling hal sano ah, iyo haddii ay leedahay ilaa saddex laamood oo lagu tilmaamey jihooyin kala duwan, waa sapling laba sano ah.
Sidaa darteed, dhirta ka weyn laba sano horeba waxay leeyihiin nidaam xidid adag, iyo marka ay qodayaan waxay ku xanuunsanayaan badan oo ka badan geedo yar yar. Geedka Tani waxay noqon doontaa mid adag in la dego, kadibna wuxuu iman doonaa muddo ah fruiting.
Fiiri maqnaanshaha koritaanka iyo dhaawaca asliga ah iyo xididdada. Qalabka hoostiisa hoostiisa hoostiisa waa in uu leeyahay midab cagaaran oo cagaar ah. Hubi in xididadu ay qoyan yihiin oo adkeeynayaan.
Haddii ay yihiin cayayaanka, ka dibna dadaal yar, oo xididaya xididka, way soo bixi doontaa. Warshadda, oo caleemaha horeba u muuqday, ma aha mid ku habboon beerto. Joogitaanka kelyaha oo barara ayaa sidoo kale aan loo baahnayn.
Xeerarka beeritaanka tufaaxa "Medunitsa" ee goobta
Apple "Medunitsa" - noocyo aan qabyo ahayn, laakiin weli waafaqsan xeerarka marka la beero iyo daryeelidda warshadda.
Geedka geedka tufaaxa dhirta, saddex toddobaad ka hor dhaxan, si ay u qaadato xidid iyo ma dhimanayo jiilaalka.
Waa muhiim! Xilliga dayrta, bisha Oktoobar, geedaha tufaaxa waxaa lagu beeray gobollo leh baraf badan oo daboolan inta badan jiilaalka. Gobollada barafka, waxay ka fiican tahay in la gooyo geed guga.
Doorashada meel loo beerayo: shuruudaha iftiinka iyo ciidda
Waxaan ku talineynaa in la beerto geedka tufaaxa "Medunitsu" ee loamy ciidda. Geedka uma dulqaadanayo biyaha taagan, sidaas daraadeed waa lagama maarmaan. Masaafada u dhexeysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 5 m.
Geedka tufaaxa waa inuu lahaadaa iftiin wanaagsan, la'aanta iftiinka ayaa saameeya dhirta si xun iyo marka lagu dhex beeray geedo kale oo tufaax ah oo kale waxay isku qarin doonaan. Bixi bannaan bilaash ah iyo aag furan oo loogu talagalay dhirta, sababta oo ah geedka tufaaxa ee Medunitsa wuxuu leeyahay height dhererka qiyaastii 5 m.
Geeddi-socodka oo dhan tufaax laga beerto "Medunitsa" wuxuu ka kooban yahay talaabooyinka soo socda:
Dhooji daloolka 1 m qoto dheer iyo 2 m dhexroor laba toddobaad ka hor inta aan la beeri.
In daloolka hagaajiyo saamiga aad kaas oo aad ku xiri doono seedling.
Ku rid seedling on buuraha iyo, toosan xididada, dabooli leh dhulka, si ay collar xidid koraayo 8 cm kor dhulka iyo hoos u hoos.
Samee dalool kaas oo sahli doona habka waraabinta dhirta.
Biyaha warshadda leh 2-3 baaldiyo biyo ah.
Xeerarka daryeelka xilliyeed ee geedka tufaaxa "Lungwort"
Daryeelka xilliga Xayawaanka waa mid muhiim ah oo saameeya kobaca dhirta iyo horumarka. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida si habboon loo daryeelo geedka tufaaxa waqtiyada kala duwan ee sanadka.
Noocaan tufaaxa waa in lagu beeraa xiga astaamaha dhirta, sababtoo ah geedka ayaa iskiis u shaqeynaya. Ujeedooyinkaas, pollinators sida ku habboon geedka tufaaxa "Medunitsa", sida "Bely ku shubtay", "Anis Sverdlovskiy", "Victory of Chernenko".
Waa muhiim! Si midhaha miraha loo koro, waxaan kugula talinaynaa in aad haysato noocyo kala duwan oo nadiifin ah oo isku mid ah.
Maalmaha xagaaga oo kulul, biyo waraabi hal mar todobaadkii leh saddex baaldiyo oo biyo ah. Marar kale, geedka tufaaxa oo ku filan hal mar bishii, waxaa lagu dari karaa bacriminta.
Guga, HOL waa in la codsadaa, horaantii xagaaga, si loo kiciyo koritaanka warshad, waxaa la bacrimiyo humate sodium, iyo dayrta hore - leh Bacriminta fosfooraska-potassium.
Si fiican u kicinayaan koritaanka iyo sameynta bacriminta nitrogen miro. Waxay u baahan yihiin in la sameeyo taxadar leh oo si taxadar leh u akhri tilmaamaha isticmaalka, sababtoo ah xad-dhaaf ah Bacriminta nitrogen waxay saameyn taban ku yeelanaysaa geedka iyo koritaanka.
Gawaarida gawaanka "Medunitsa" waa qayb muhiim u ah beerista iyo daryeelka. Gooyo waxaa la fuliyaa Maarso, marka aan ubbooyinku weli aan ubaxin. Isla mar ahaantaana, laamood qallalan oo duug ah ayaa la googooyaa, caleemaha ka soo horjeeda xididada.
Waa muhiim! Marka laamaha la gooyo, boogta keentay waxaa lagu shaabadeeyey rinji ama jardiinka beerta.
Sida kor ku xusan, ka dib toban sano oo fruiting in bacriminta dhirta geedaha hoos u dhaco. Si arrintan loo hagaajiyo, guga, ka hor inta aan la bararin, waxay sameeyaan manjooyin cusub oo lafdhabarta lafaha, kuwaas oo ku yaalla laanta dhinaca, taas oo gacan ka geysatey baraarujinta burooyinka nasinta iyo qulqulka nafaqada.
Faa'iidooyinka kala duwan ee noocaas ah waa in si joogto ah lagama maarmaan u yahay samaynta taajkii geedka. Tijaabinta tufaaxa tufaaxu waxay ku dhacdaa sida hoos ku qoran.
Qaybta muhiimka ah ee daryeelka dhirta ayaa isku diyaarinaya jiilaalka. Ka hor intaanay billaabin, barxadda dhow ee geedka waxaa lagu daboolay Bacriminta, sida humus iyo peat, lakabka aan ka yarayn 10 cm. Dhirta dhalmada waxaa loo xiraa taageero sababtoo ah geedku wuu jebin karaa miisaanka barafka.
Ka hortagga iyo daaweynta cayayaanka iyo cudurrada
"Medunitsa" waa geedka tufaaxa, sharaxaadda noocyada kala duwan ee diiradda saaraya caabbinta wanaagsan ee cudurada fungal iyo qolof, laakiin suurtagalnimada caabuqa looma saarin. Si looga fogaado cudurka geedka, xilliga dayrta iyo guga jirriddu waa cadaan. Si looga fogaado faleebada qolofta, waxaa loola dhaqmaa hab gaar ah mar xili kasta.
Dagaalka ka dhanka ah qolofka iyo fangaska kale waxaa loo isticmaalaa daroogooyinka kala qaybsanaan noocyada:
Sidoo kale waa muhiim inaad ilaaliso geedaha tufaaxa ee cayayaanka, gaar ahaan laga bilaabo aboorka iyo aphids.
Fitosporin waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay mid waxtar leh oo daroogo aan suntan lahayn. Waxay ku saleysan tahay bakteeriyada cagaaran ee bakteeriyada, taas oo burburisa qolofta. 10 kiniin ah oo daroogada ah ayaa lagu kala diraa 10 litir oo biyo ah. Moobeyl ayaa la qaadaa saddex jeer xilli: marka burooyinkeeda la abuuro, ka dib ubax iyo bilawga sameynta midhaha.
Waxaad ku daadi kartaa geedka tufaaxa ah ee Bordeaux isku dar ah. Daaweynta koowaad waxaa la sameeyaa ka hor intaan bararka kelyaha. Wadar ahaan, todoba daaweyn ayaa la sameeyaa, kala diri 400 g oo lime ah iyo 400 g oo ah naxaas sulfate 10 litir oo biyo ah. Isku darista Bordeaux wuxuu saameynayaa noocyada kale ee fungus, tusaale ahaan, xayrta maqaarka.
Iyada oo la jabinayo xagta oo budada ah, geedka waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa daroogada "Hom", inta lagu jiro dhamaadka ubax. Ka dib goosashada ka dib, processing la fuliyaa leh sulfate ama birta naxaas ah. Xilliga jiilaalka, dhirta ayaa waxyeeleyn kara jiirka. Ilaalinta jirridda ee dhirta waxay gacan ka geysan doontaa in la xoqdo xargaha ama lapnik.
Geedka weyni wuxuu soo saaraa dalagga 80 kg. Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho sannadka afraad kaddib marka la beerto. Miraha waxay bilaabaan inay u bislaadaan bisha Agoosto oo aaney isku mid ahayn, taas oo xoojinaysa geedi socodka goosashada. Bisaylkiisa buuxa wuxuu dhacaa horraanta Sebtembar.
Mujuurida waxaa loo sameeyaa laga bilaabo laanta hoose ee geedka. Si tartiib ah u jeexi tufaaxa, si aanay u dhaawacin maqaarka, iyo si wada jir ah. Isku ururinta cimilada qallalan.
Ku kaydi heerkul aan ka badnayn +5 ° C Si aad u ilaaliso si fiican, u duub tufaax warqadda si aysan u taaban, oo u geli sanduuq alwaax ah. Xaaladdan, tufaaxa waxaa lagu keydsan karaa iyada oo aan lumin dhadhanka, illaa 1.5 bilood.
Ma taqaanaa? "Medunitsa" ma ahayn gobol goboleed, sidaas darteedna waxay ku baahsan tahay gobollada post-Soviet-ka.
Iskudhin "Medunitsa" oo leh xannaanada saxda ah ayaa kuu keeni doona dalag weyn oo leh miraha dhadhan fiican leh. Xaaladdan, waa inaad ku dadaashaa dadaal iyo kharash aad u yar si loo hubiyo xaaladaha wanaagsan ee horumarinta caadiga ah iyo midhaha miraha dhirta.